Abantu bavame ukucabanga ngale mibuzo lapho bethenga usofa omusha wendlu yakho, yisiphi isitayela esikhanga kakhudlwana, yini impahla ihlala isikhathi eside, lesikhumba noma lendwangu usofa yikuphi okungcono? Empeleni, ziningi izinto ezibhekwayo ukuthi ngabe isabelomali, induduzo, isitayela, njll ngemuva kwakho konke kungenye yezingxenye ezibaluleke kakhulu empilweni yakho. In terms of the leather vs…
Umbhede njengendima ebalulekile yefenisha yasekhaya ubalulekile empilweni yethu yansuku zonke. Umbhede okhululekile futhi othambile unquma ikhwalithi yokulala kwakho. Uma umbhede kunzima ukulala uphumule, kuzokwenza uzizwe ukhathele ngosuku olulandelayo okuthinta kakhulu isimo somsebenzi womuntu. There are a wide variety of types for the bed…
Isingeniso Isihlalo sesihlabathi sikagesi sinezinkinobho ezahlukene. Izinkinobho eziya phezulu naphansi kwinkinobho zingalawula phezulu naphansi ngemuva kwesofa. Ngokulungiswa kukasofa kagesi, isikhundla somuntu esikhusheni naso sizoshintsha, njengokuhlehlela emuva. Ngezikhathi, abantu bazohambisa izinkalo zabo emuva, and vice…
Kunemithetho emihlanu yokulungiswa komatilasi. Ngiyethemba ukuthi kukusiza ukuthi ubize isikhathi esincane ukungena ubusuku obuhle kunokukhathazeka ngothuli, igciwane, njll BUSA 1: Faka umoya kumatilasi wakho nsuku zonke Ubusuku ngabunye, ngamunye wethu ulahlekelwa cishe uhhafu welitha lamanzi ngenkathi silele, which creates an appealing environment for dust mites and can lead…